Uminumlọ ọrụ na-emepụta mpempe akwụkwọ Aluminium, ndị na - ebunye ya - China Aluminium Sheet Manufacturers
6061 Aluminium mpempe akwụkwọ & efere
Diamond checkered aluminum efere maka toolbox
aluminum alloy mpempe akwụkwọ
Ule T Hot gosipụtara Ndị Bịara Ọhụrụ Kacha Mma Ngwaahịa
7050 AKWUMKWỌ ALUMINUM
7050 aluminium bu ihe eji eme ka igwe kpo oku di ike, nke nwere nguzogide corrosion karia 7075 aluminom. na ike ka mma. Nwee mmetụta dị ala karị na quenching
7075 AKWUMKWỌ ALUMINUM
7075 aluminum efere bụ nke Al-Zn-Mg-Cu super ike aluminum, nke bụ a elu ike, elu ekweghị ekwe oyi na-arụ ọrụ ibe ya bụrụ alloy, nnọọ mma karịa nwayọọ nchara.
6061 aluminom mpempe akwụkwọ
6061 aluminom mpempe akwụkwọ bụ a elu mma alloy ngwaahịa emepụta site okpomọkụ ọgwụgwọ na tupu ịbịaru maka Mg na Si, na magburu onwe machinability, weldability na plating Njirimara, ezi corrosion eguzogide na elu ike.
6063 T6 aluminom mpempe akwụkwọ
6063 alloy aluminum plate bụ Al-Mg-Si nnukwu plasticy alloy, na magburu onwe nhazi Njirimara, magburu onwe ịgbado ọkụ, extrusion na plating, ezi corrosion eguzogide, ike, mfe Polish, mkpuchi, anodic ọxịdashọn mmetụta bụ magburu onwe, bụ a na-ahụkarị extrusion alloy.
6082 aluminom mpempe akwụkwọ
6082 aluminum efere bụ dịtụ mma alloy aluminum efere n'etiti 6 usoro aluminum efere (Al-mg-Si), na ezi formability na mfe nhazi, ezi anodic mmeghachi omume arụmọrụ, mfe mkpuchi, ezi corrosion-eguzogide na ọxịdashọn eguzogide.
5A05 aluminom mpempe akwụkwọ
5A05 aluminom mpempe akwụkwọ bụ ihe nchara aluminom nke aluminom-magnesium, njirimara ndị bụ isi bụ obere njupụta, ike mgbatị dị elu na ogologo elongation. Maka otu mpaghara ahụ, ịdị arọ nke aluminom-magnesium alloy dị ala karịa usoro ndị ọzọ.
Anodized Aluminium mpempe akwụkwọ Metal Suppliers, aluminum checkered mpempe akwụkwọ price, Ngwa ala Aluminom, aluminum alloy 6061 ọnụahịa, Mpempe akwụkwọ Aluminom Aluminium, 7050 aluminum mpempe akwụkwọ,